Lahatsoratra momba an'i Aotrisy
Manofa trano sy trano any Aotrisy
Desambra 3, 2020 Antika Kumari Aotrisy, trano
Ny trano any Aostralia dia misy trano fisaka lehibe any amin'ireo tanàn-dehibe sy trano bongo any amin'ny faritra tsy dia be mponina. Ny trano dia mirona amin'ny vidiny lafo sy mahazatra. Na izany aza, ny mpifindra monina sy ny pat-taloha dia tokony ho mailo fa toerana maro no tsy vita rehefa
Asa sy asa any Aotrisy
Novambra 27, 2020 Antika Kumari Aotrisy, asa
Ny miasa any Aostralia dia mety ho nofinofy lehibe indrindra amin'ny olon-drehetra izao, saingy misy ny zava-misy momba ny tsenan'ny asa. Tokony ho fantatrao izany alohan'ny ahafahanao mifindra. Amin'ny faritra sasany, miatrika tsy fahampian'ny asa ny firenena;
Mangataha Asylum any Aotrisy! Hamarino eto!
Aogositra 26, 2020 Karuna Chandna Aotrisy, mpitsoa-ponenana
Raha sanatria misy matahotra hiverina any amin'ny fireneny. Na tsy manana fanjakana ny trano farany. Satria mety hahita loza ianao. Afaka mahazo fiarovana any Aotrisy ianao. Ny dingana voalohany voalohany ahazoana filaminana dia
Visa any Austria
Aprily 29, 2020 Antika Kumari Aotrisy, Travel, visa ho
Hitsidika an'i Austria raha misy antony, na ho an'ny fizahan-tany na hianarana na hiasana. Mila mila visa amin'izany ianao raha tsy olom-pirenen'i Aostralia. Ireto misy teboka vitsivitsy hahafahanao mangataka
Oniversite tsara indrindra any Aotrisy
March 19, 2020 Shubham Sharma Aotrisy, fianarana, Travel
Aotrisy, firenena kely iray any Eropa fa ny hatsaran'ny fampianarana any amin'ny oniversite any Aotrisy dia ekena manerana an'izao tontolo izao. Maro ny oniversite eto amin'ny firenena no manana toerana ambony eto amin'izao tontolo izao. Ny zavatra tsara indrindra momba an'i Aotrisy dia ny fanabeazana
Fitsaboana sy hopitaly ary klinika tsara
Febroary 2, 2020 Antika Kumari Aotrisy, fahasalamana
Austria dia manome iray amin'ireo toeram-pitsaboana tsara indrindra eto an-tany. Ary ny fidirana amin'ny serivisy fitsaboana dia heverina ho lafatra amin'ny lafiny iraisam-pirenena. Ny fiakaran'ny vidin'ny vidiny tato ho ato. Ary ny fomba fahaiza-manao
Bank any Aotrisy
Febroary 1, 2020 Antika Kumari Aotrisy, Travel
I Austria dia iray amin'ireo firenena manan-karena indrindra amin'ny faritra euro. Ary ny rafitry ny banky eto amin'ny firenena koa dia mahomby ary mahafeno ny fenitra manerantany. Ny sampan'ny banky dia manerana ny kaontinanta lehibe rehetra. Misy banky 700 any Aostralia ahitana banky iraisana, banky ara-barotra,
Fianarana any Aotrisy.
Janoary 31, 2020 Antika Kumari Aotrisy, fianarana
Tsy i afovoan'i Eropa ihany no misy an'i Aotrisy - fa ny firenena dia nitana andraikitra lehibe tamin'ny tantaran'ny Eropa ihany koa. Betsaka ny antony hianarana any Aotrisy, ao anatin'izany ny oniversite maromaro izay mitana ny laharam-pahamehana
Ny rafi-pitaterana any Aotrisy.
Janoary 30, 2020 Antika Kumari Aotrisy, Travel
Austria dia iray amin'ireo rafitra fitaterana mandroso indrindra eo amin'ny Vondrona Eropeana. Indrindra ny renivohitra Vienna dia manana fotodrafitrasa fitateram-bahoaka tena tsara. Hevitra vitsivitsy momba ny rafitry ny fitaterana miasa any amin'ny rafitra marina i Vienna. Tsy misy tapakila
Toeram-pivarotana 5 sy tsena ambony indrindra any Aotrisy
Janoary 28, 2020 Antika Kumari Aotrisy
Mila sakafo, lamba, fanaka? Manana tsena sy magazay isan-karazany ho anao i Austria. Ireto misy famaritana fohy momba ny magazay 5 sy tsena tsara indrindra eto Austria. Ary koa ho iray amin'ireo toerana tsara indrindra